I-37 YOYILO LWEKHITSHI YOYILO KUNYE NOBEKO (IMIFANEKISO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-37 yoyilo lweKhitshi yoyilo kunye nobeko (Imifanekiso)
I-37 yoyilo lweKhitshi yoyilo kunye nobeko (Imifanekiso)
Ikona yokupheka yeklasikhi: Uyilo lwekhitshi olunemilo engu-L. Uyilo lwekhitshi olunemilo engu-L luyinto yakudala ngesizathu - luyile ngobuqili ukwenza uninzi lwendawo yokupheka encinci. Ngendawo yokusebenza eyakhiwe ngeendonga ezimbini ezidityanisiweyo. Njengoko ifuna iindonga ezimbini ezikufutshane kuphela, ilungile kwindawo yekona kwaye isebenza kakuhle kwizithuba ezincinci okanye eziphakathi. Ikhitshi emile njengo-L ikwabonisa unxantathu wekhitshi wendalo apho umpheki anokusebenza ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Kumfanekiso ongentla kwekhitshi enkulu emile njenge-L ineempawu zedizayini yoyilo kunye neenkcukacha zeNeo-classic zidityanisiwe ukwenza inkangeleko entle. Ineethayile ze-beige Tuscan kwimigangatho yayo kunye ne-backsplash egcwalisa iikhabhathi ezimhlophe ezingasasebenziyo. Izinto zokubala zenziwe ngombala omdaka ngegranite enethoni efana neethayile ezibuyela umva. Kukho iithayile zemibala yegolide yoluhlu lwendawo yokupheka yokubuyela umva, ukuyinika ukuqaqamba okungakumbi.
Uyifumana njani ilayisensi yomtshato kwi-ma
L Ubume beKhitshi obumiselweyo
Ubume obunemilo engu-L buthathelwa ingqalelo njengolona hlobo luthandwayo lobeko lwekhitshi. Ngokuthambekela kokuthambeka kweendawo ezivulekileyo zekhitshi kunye nokuhla kwesidingo segumbi lokutyela elisesikweni ekhaya, iikhitshi ezimile okwe-L ziye zaba yeyona nto ndiyithandayo ngoku kuyilo lwekhitshi. Olu hlobo lobume bekhitshi lubonelela ngokusebenziseka kunye nokulinganisela okugqibeleleyo kungekuphela kuyilo kodwa nakwindlela esebenzayo ngayo.
Olu hlobo lwesakhiwo sekhitshi luphawulwa ziindonga ezimbini ezidibeneyo ezijikeleze enye kwenye. Ubume bayo buthatha ifomu engu-L, ke igama elithi ikhitshi elimile uL. Inokuba ncinane okanye inkulu, ivule, ivaliwe okanye ivalwe ngokulinganayo. Ngelixa kungekho mda kubungakanani bekhitshi eyenziwe ngo-L, ubude bemilenze ye-L buhlala naphi na ukusuka kwi-12 ukuya kwi-15 yeenyawo ubude.
Ikhitshi elimile u-L likwanendawo yokusebenza efanelekileyo evumela izixhobo okanye ikhabhinethi ukuba ifakwe kufutshane neendonga ezi-angled ngelixa ushiya indawo evulekileyo embindini. Le ndawo ivulekileyo inokusetyenziselwa ukubandakanya isiqithi sekhitshi embindini. Xa kuthelekiswa nolunye ubeko lwekhitshi, ikhitshi elimile njengo-L lisebenzisa indlela ecandwe apho iindawo ezithile zichongwe zodwa kwisithuba. Oku kuseta kubandakanya indawo ezinje ngendawo yokupheka, ukulungiswa kokutya okanye indawo yokucoca, indawo emanzi neyomileyo kunye nendawo yokutyela.
Ngaphandle kokongeza ixabiso lobuhle kumakhaya, kukho izibonelelo ezininzi zokusebenzisa ubume bekhitshi obume ngo-L. Nazi ezinye zezibonelelo ezakhiwe ngohlobo lwekhitshi engu-L:
Iyasebenza -Ikhitshi ebunjiweyo engu-L inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Kuba olu hlobo lubhetyebhetye ngokwendlela yoyilo, kuqinisekisa ukuba ikhitshi lakho lihlala kwiindawo ezahlukeneyo ezinokubonelela ngemisebenzi eliqela efana nokutya, ukupheka, ukulungisa ukutya nokugcina. Ikwenza okuninzi ngaphandle kwendawo yakho yekhitshi kuba inegalelo lokongezwa kwesiqithi sekhitshi- indawo eyongezelelweyo yokubala ekwaluncedo kakhulu kulungiselelo lokutya kunye nokugcinwa.
Ikwayenye yezona zisombululo zidumileyo zokuguqula ikhitshi lakho rhoqo libe kukutya okuphuculweyo ekhitshini. Umlenze omnye we-L unokusetyenziswa njengendawo yokutyela eqhelekileyo apho ungabeka khona izitulo zebar kwaye wonwabise iindwendwe kwaye uqokelele amalungu osapho. Ngobume obume ngo-L, indawo yokugcina eninzi yenye yezona zinto zincinci onokuthi ukhathazeke ngazo. Kuba yenziwe ngeendonga ezimbini ezikufutshane, oku kunika ithuba elifanelekileyo lokubandakanya iikhabhathi ezingaphantsi nangaphantsi kweekhabhathi.
Uyilo oluguquguqukayo noluguquguqukayo Ukusebenza kunye nobuhle buyahambelana ukuze kuphunyezwe uyilo lwekhitshi olulungeleleneyo. Ukuba bhetyebhetye kuyilo yenye yeenzuzo zika-L uyilo lwekhitshi olubunjiweyo njengoko lunokuyilwa ngokokuthanda kwakho, kuxhomekeke kwiimfuno zakho ezithile. Ngendawo yayo eyaneleyo, unokwandisa indawo yokugcina kunye nokulungiselela ngaphandle kokuncama i-aesthetics ebonakalayo.
Olunye okanye zombini udonga lunokuba lwakhiwe ngaphakathi kwiikhabhathi ezingaphezulu nezisezantsi, okanye lunokushiywa njengendawo yokubeka elula evulekileyo. Kuxhomekeke kubukhulu begumbi, inokuthi ilingane nesiqithi. Iiyunithi zokugcina zinokugxilwa eludongeni olunye okanye kulungelelwaniso lomgama. Ungayisebenzisa ukutshintshela kwezinye iindawo zekhaya lakho kakuhle. Ikhitshi elimile njengo-L linokulungiselela izinto ezisisigxina ezinje ngokwakhiwa kuluhlu okanye izinto ezizodwa ezifana nesikhululo sokubhaka kwikhawuntara yesiqithi.
Utshintsho kulo naluphi na uhlobo lokumiselwa kwekhitshi -Ukhitshi omile u-L uhambelana nayo nayiphi na indawo kunye nesitayile soqwalaselo lwekhitshi, nokuba luvulekile, luvaliwe okanye luvalwe. Nokuba ubungakanani bekhitshi lakho, i-L emile ekhitshini inikezela uyilo oluqinisekileyo oluqinisekisiweyo ukuba lulungele zombini iikhitshi ezincinci okanye ezinkulu. Kwizithuba ezinkulu, ikhitshi eyenziwe ngo-L kulula kakhulu ukuyifaka
Ukuqinisekisa ukusebenza konxantathu womsebenzi Ikhitshi elimile L linceda ukugcina isithuba esichanekileyo phakathi kweendawo eziphambili zekhitshi ezizezi ifriji, isinki kunye noluhlu. Ngokwesiqhelo, elinye lamacala liqulathe indawo yokupheka kunye nokulungiselela ngelixa elinye icala liqukethe indawo yokugcina ebandayo neyomileyo. Ukuba ukwangumntu othanda ukupheka, olu luhlobo olulungileyo lwekhitshi lakho.
Ivumela abasebenzisi abaninzi ngaxeshanye -Enye yezona zinto zibalulekileyo kulwakhiwo lwekhitshi engu-L kukuba ngaxeshanye ivumela abasebenzisi abaninzi ngaphakathi ekhitshini ngaphandle kokuxinana kakhulu. Ngendawo eyaneleyo kunye neendawo ezichongiweyo zokupheka nokulungiselela, abantu banokonwabela imisebenzi emininzi ngaxeshanye. Ukuba ungumntu othanda ukonwabisa, ke le ikwayindlela efanelekileyo yokwenza ikhitshi kuba ikuvumela ukuba upheke ukutya ngelixa uncokola nosapho ngolonwabo. Ungadibana nabahlobo njengoko ulungiselela ukutya ngelixa behleli kufutshane nekhawuntara yakho yebar okanye ungonwabela imisebenzi yasekhitshini njengomsebenzi wokudibanisa usapho. Ngenxa yoko, abasebenzisi abaninzi bavumela ukuba umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza kwaye kube lula.
Iphucula ukuhamba kwezithuthi ekhitshini -Ngocwangciso olufanelekileyo kunye noyilo, ikhitshi elimile u-L linokukhuthaza umsebenzi ococekileyo kunye noququzelelo lokuhamba kwezithuthi ekhitshini. Abantu banokungena ngokulula nangaphandle ekhitshini kamnandi ngaphandle kokukhathazeka ngokuza ngendlela yabanye.
Ukulungiselela indawo ezincinci Uyilo olumiliswe ngu-L luqhelana kakuhle neendawo ezincinci. Iphinda-phinda indawo yokugcina kunye nendawo yokulungiselela xa kuthelekiswa nekhitshi egaliweyo enesithuba esinye sokubala.
Inika ithuba elifanelekileyo lokubandakanya isiqithi kuyilo lwakho lwekhitshi - Kuzo zonke iindidi zamacwecwe ekhitshi, ikhitshi elimile L lelona liqithi elinobuhlobo kuba libanzi. Le khawuntara yesiqithi inikezela ngakumbi indawo yokupheka, ukulungiselela okanye ukuxhoma.
Isicwangciso somgangatho ohambahambayo -Ikhitshi elibunjiweyo elingu-L elinemingxunya emininzi lidala inguqu egudileyo phakathi kweminye imimandla yekhaya njengoko idibanisa kamnandi kwiindawo ezivulekileyo. Ingasetyenziselwa ukudibanisa izithuba kwindawo yokutyela, i-lanai okanye indawo engasemva.
Igalelo lobuhle bembonakalo -Ikhitshi elimile l likhangeleka ngokwendalo- nekhabhathi epheleleyo ebaleka eludongeni kunye neendawo eziphangaleleyo zokubala, olu luhlu lubonelela ngendawo efanelekileyo yokubonisa ukugqitywa okutyebileyo okunje ngamanqwanqwa amatye endalo okanye iikhabhathi ezenziwe ngomthi eziluhlaza ezinemilinganiselo emihle yokugaya umbala kunye nebala. Nokuba ukuhonjiswa okulula okanye okuncinci kunokwenza olu lwakhiwo lwekhitshi lubonakale. Ukubuyisa, ikhitshi elihle nelicwangciswe kakuhle liza kongeza ixabiso ekhayeni lakho. Kwimeko yokuthengiswa kwakhona, unokutsala abathengi abaninzi okanye abathengi abanokubakho.
Ngaba kukho nasiphi na isiphako ekusebenziseni ubume bekhitshi obume ngo-L? Kwezinye iimeko, kukho iingxaki ezimbalwa kwi-L indawo ekhitshi emile. Inye kukuba ekubeni kukho indawo ethe kratya yokubaleka, kufuna umgudu ongakumbi ukuyigcina. Olu hlobo lobeko lwekhitshi lufuna izinto ezininzi zokugqibezela, yiyo loo nto ifuna uhlahlo-lwabiwo mali oluninzi. Nangona kungafuneki, ukongeza ngokuzithandela kwesiqithi kukwaqhuba iindleko ezongezelelweyo. Kwi-avareji kubiza kakhulu kuneekhitshi ze-galley. Okokugqibela, ayingabo bonke abaninimzi abakuxabisayo ukusasazeka kobume bonxantathu bomsebenzi kwikhitshi emile engu-L. Abanye banokufumana ukuya ngapha nangapha phakathi kwesinki, uluhlu kunye nefriji edinisayo.
Nanku umzekelo wobume bekhitshi obume l:
Uluvo olusemva konxantathu womsebenzi wasekhitshini kukubeka ezona ndawo zintathu zixhaphakileyo zomsebenzi kweyona ndawo isebenzayo ngaphandle kokunciphisa ukugcwala kwabantu kwindawo yokusebenza.
Ezi ndawo zintathu yindawo yokugcina ebandayo (ifriji), indawo yokucoca / yokulungiselela (isinki) kunye nendawo yokupheka (isitovu).
Uyilo oluqhelekileyo olu-L oluyikhitshi lugubungela unxantathu wasekhitshini. Ifriji inokubekwa kwelinye icala lomlenze, isitovu kwelinye icala, kunye nesinki embindini. Izithuba eziphakathi zinokunikezelwa ngaphezulu kokuphikisa phezulu kunye nendawo yokugcina.
Olu luyilo lulungile kwisicwangciso esivulekileyo sokuhlala njengoko sinokuvula ngokulula kwelinye igumbi. Indlela entle yokuba nekhitshi eyenziwe ngo-L kukuba umlenze ube ludonga oluqhubekayo ngelixa olunye ludonga oluvulekileyo olunokuthi lubandakanye ikhawuntari okanye isiqithi esijonge edinning okanye kwigumbi lokuhlala. Oku kuvumela indawo ephefumlayo ngakumbi enokudala ukuhamba phakathi kweendawo ezahlukeneyo zekhaya.
Esi sithuba sikhulu sekhitshi sibonisa ubume obume ngo-l kunye nesiqithi eside. Iikhabhathi ezimhlophe ezineengcango zeglasi zithelekisa kakuhle nomthi wesiqithi kunye nomgangatho wecherry. Zimbini iintlobo zokubala kunye negranite emnyama yeekhawuntari eziphambili kunye nemabhile emhlophe yesiqithi.
iikowuti ngothando nangomtshato
Le khitshi yanamhlanje enoyilo olumilisiweyo ineekhabhathi ezimdaka ngombala kunye neekhawuntara zokukhanya zegranite kunye nepeninsula encinci yesidlo sakusasa yokutya ekutyeni.
Olu luhlu lwangoku lwekhitshi emile okwe-l lubonisa iikhabhathi ezimhlophe, isitopu esimhlophe esimhlophe somgangatho kunye neglasi yokubuyela umva kweglasi eluhlaza okwesibhakabhaka. Ikhabhinethi ayinayo i-hardware eyinika i-design ngisho ne-sleeker ngelixa ukukhanya kwekhabhinethi engaphantsi kunika ukukhanya okukhulu kwii-countertops.
Uyilo lwekhitshi lwangoku l olunezinto ezinobukhazikhazi obuphezulu, ikhawuntara emnyama emnyama kunye nekhabhathi ephezulu yeglass esezantsi yenza umbono omkhulu. Uyilo lwekhitshi olucekeceke ngokukhanya luyakhanya kwaye lukhanya ngokukhanya okukhulu kwesibhakabhaka ngaphezulu kwentloko kunye nezixhobo zesilivere kunye nezixhobo.
Uyilo lwekhitshi oluza kuyila kunye nokusetyenziswa kweekhabhathi ezigobileyo ezigqityiweyo nge-laminates emhlophe ebengezelayo. Eli khitshi linomtsalane wexesha elizayo, ngakumbi ngenxa yokusebenzisa iikhabhathi ezingaphezulu. Kwi-countertop yayo, isebenzisa indawo elula kunye ne-gray eqinileyo kunye nokudibanisa kunye neethayile ezimnyama zemibala kwi-backsplash.
L Ubume beKhitshi obuBumbeneyo nesiqithi
Ngamanye amaxesha, ikhitshi elimile u-L linendawo eninzi oyifunayo oyifunayo kodwa uswele indawo yokusebenza. Ukujongana nale ngxaki, isisombululo sobuchule esenziwe ngobuchule, yiyo loo nto kwafika ikhawuntara yekhitshi yesiqithi. Uyilo lwekhitshi olwenziwe L olunesiqithi lusebenza kakhulu ngenxa yolwakhiwo lwazo. Xa imiselwe kakuhle yonke into kufuneka ifikeleleke ngokulula, kunye nomhlaba ongaphezulu kwesi siqithi ukulungiselela ukutya okanye ukutya kwindawo yokutya.
Ukuba ufuna ukuphucula ukusebenza kwekhitshi yakho emilise u-L, ke isiqithi sekhitshi sinokukunceda wenze iqhinga. Ukongeza ekuphuculeni i-aesthetics ebonakalayo ekhayeni lakho, olu phawu loyilo lunokukunceda wandise yonke intshi yendawo yakho yasekhitshini. Esi sisombululo sendawo esisebenzayo siqinisekisiwe ukuphucula iimeko zokusebenza kunye nekhitshi lakho, ukubonelela ngendlu evakala ngokufanelekileyo.
Isiqithi yindawo yokuma simahla yokusebenza eyahlukileyo kulwakhiwo esele lukhona ekhitshini. Ihlala ifunyanwa embindini wekhitshi kwaye inobungakanani obuphakathi kwe-3 nge-6 iinyawo, ukuphakama kwama-36 ukuya kuma-40 e-intshi okanye i-90 ukuya kwi-110 yeesentimitha. Olu kongezo lusebenzayo lubonelela ngokuguquguquka ngokwendlela yoyilo kunye nokusetyenziswa. Indawo yokusebenza eyongezelelweyo ibonelela ngendawo yokulungiselela ukutya, ukugcinwa okongeziweyo okanye indawo yokutyela engekho sikweni okanye inokusetyenziselwa ukulungiselela imisebenzi ekhethekileyo enjengokubhaka, ukucheba inyama okanye ukubheja.
Ukongezwa kwesiqithi kwikhitshi ebunjiweyo engu-L akupheleli nje ekwandiseni indawo kodwa kuphucula intsebenzo ngokuhambisa ukuhamba komsebenzi kwicala lendlela ezine. Ngokucaca ngokwaneleyo kwee-intshi ezingama-40 macala onke, kulula ukuhamba ekhitshini kwaye utshintshe phakathi kwemisebenzi. Indawo yayo ekuyo ivumela ukuhamba ngokulula ngaphandle kokuxinana kunye nokuphelisa ukubakho kokuza ngendlela yabanye.
Esinye isibonelelo sayo kukuba inegalelo kubuhle bekhaya lakho njengoko isiqithi sekhitshi esenziwe kakuhle sinokuthi sisebenze njengendawo ekugxilwe kuyo okanye umtsalane ophambili kwisithuba. Ngeentlobo ngeentlobo zokugqitywa ezinokubonelelwa ngazo, ukongezwa kwesiqithi kwikhitshi yakho emilise u-L kudala amagumbi angapheliyo okunokwenzeka. Ukusuka kwiitafile zetayile ezilula ukuya kumatye endalo amangalisayo njengemabhile okanye igranite, ikhawuntari yesiqithi yongeza uphawu olwahlukileyo kwikhitshi yakho emile engu-L. Kwakhona, ikhitshi elimile L elinekhawuntari yesiqithi libonakala linobunewunewu, linodidi kwaye lenza indlu yakho ibonakale inkulu.
Izipho zeentsuku ezimnandi ze-valentines zakhe
Kukho iindlela ngeendlela zokuyila ikhitshi emile L kunye nesiqithi. Imiphezulu egudileyo enjengokhuni, ilitye lendalo, ithayile okanye intsimbi engenasici inokusetyenziselwa izixhobo zokulungiselela ukutya okanye ukuvumela ukutya okushushu kupholile ngaphambi kokuphaka. Uyilo oluphambili ngakumbi lunokuqaqambisa isinki yesibini okanye ezinye izinto ezinikezelwe kwimisebenzi ethile - ibhloko yesilarha ebekwe ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi iyakuguqula ngokulula oku kube yindawo yokuxhela. Indawo yokuxova kunye nokwakhiwa eontini kuyiguqulela kwangoko kwisitishi sokubhaka. Ngaphantsi kwesela lewayini kunye nendawo ephakanyisiweyo yokwenza indawo efanelekileyo yokuxuba ii-cocktails kunye nokonwabela iziselo eziqhelekileyo kunye nabahlobo. Ikhawuntari yesiqithi yelitye lendalo ingasetyenziselwa ukonwabela ukutya kunye nokutya nje usapho kunye nabahlobo. Izixhobo ezifana neeyunithi zefriji, izinto ezipholileyo zewayini, i-grill okanye i-griddle inokuphinda yongezwe kwikhitshi lakho elimile L kunye nekhawuntara yesiqithi ukuba ufuna ukonwabela amava okupheka aphambili.
Ukushwankathela, iikhitshi ezimile okwe-L kunye nekhawuntara yesiqithi ziyasebenza kwaye zinokuhombisa, zibonelela ngesisombululo esimnandi sokugqiba indawo yokusebenza enokusetyenziselwa ikhitshi lakho.
Le khitshi emile okwe-L inikezela ngebhodi yebhodi yekhabhathi enesiqithi esihle semarble saseCarrara kunye nomgangatho okhanyayo womthi.
Le khitshi yanamhlanje ine-l emile yoyilo lwesiqithi, ikhabethe yaseYurophu kunye nekhabhathi emhlophe yokukhanya. Isiqithi sinendawo yokubaleka yokutya kwindawo yokutyela kunye nesinki eyakhelwe-ngaphakathi ukulungiselela ukutya okulula kunye nokucoca.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje oludibanise imibala eyahlukileyo. Iindonga eziluhlaza okwesibhakabhaka zibonelela ngemvelaphi epholileyo kwaye ijongeka ngathi ithambile kwiikhabhathi ezinamacwecwe eTeak. Ikwanesiqithi sekhitshi esivela kwibhodi yefayibha eyakhelweyo epeyintiweyo ngombala ohlaza okwesibhakabhaka njengeendonga kunye nelitye lenyengane. Olunye uyilo lwekhitshi oluqhelekileyo olunokoyikisa kancinci ngenxa yobungakanani bayo kunye nokukhetha okuhle kwezinto. Isebenzisa iikhabhathi eziQinisekisiweyo zeRed Mahogany ezineenkcukacha ze-neo-classic ezipeyintwe ngegolide. Ii-coutnertops ze-beige quartz zinceda ukulinganisela kubomvu bomthi, ngelixa iithayile zetuscan backsplash zinika indawo ubume ngakumbi.
Eli khitshi lanamhlanje lifumana ukuphefumlelwa kwiikhitshi zesiko, kwaye lisebenzisa iikhabhathi zomthi oqinileyo ezimnyama ezidityaniswe nesaliti entle yamatye. Inesiqithi sekhitshi embindini esineeekhabinethi eziphambili kwaye isebenzisa ukukhanya kwe-beige backsplash tile kunye nemigangatho emhlophe ukucwangcisa iithoni zomthi ezimnyama. Iindonga ezenziwe nge-mint zale khitshi zibonelela ngemvelaphi epholileyo yale khitshi yohlobo lwendabuko, inika isibheno ngakumbi sobufazi. Iikhabhathi ezihonjisiweyo zifakwe emthunzini omhlophe kwaye zine-slab eshinyeneyo yegreyite egrey. Kukwaphawuleka ukuba sisiqithi sekhitshi esimile ngokukodwa esinika esi sithuba indawo yokupheka ngakumbi kunye nobuntu ngakumbi.
Uyilo lwekhitshi lwangoku olune-L oluneminyango epeyintiweyo emhlophe engenanto kunye nezinto zokubala ezingwevu eziqinileyo. Isebenzisa iithayile zeglasi emhlophe kunye nezimhlophe kwi-backsplash yayo yokutshatisa iikhabhathi kunye ne-countertop, kwaye ikwabeka nesiqithi esikhulu sekhitshi, ukubonelela ngomsebenzi owongezelelweyo kunye nendawo yokutyela. Enye isitayile sendabuko esimile okwe-L esineengcango zekhabhathi ezixhonywe kakhulu kunye neenkcukacha ezintsonkothileyo ze-neo-classic. Ithoni yeorenji yeli bala lomthi inika indawo ukukhanya okufudumeleyo okuqaqambileyo, okungathathi cala ekusebenziseni i-countersop emhlophe ye-quartz kunye neendonga ezikhanyayo ze-beige. Idibanise izixhobo zombane kwikhabhathi kwaye ikwafaka nekhabhathi yewayini. Le khitshi elula ibeka iikhabhathi zayo zeBech kwi-red Mahogany stain, inika i-sheen efihlakeleyo. Izinto zokubala ziyi-granite enepinki kunye neetoni ezimnyama ezingwevu, ngelixa i-backsplash isebenzisa ukukhanya kweethayile zohlobo lweTuscan, inika indawo eyongeziweyo kunye nesibheno esidala.
Olu lolunye uluvo lwenqaku lokuqala lekhitshi kweli nqaku. Ukusuka kule ngile, uyakubona irock edityanisiweyo efunyenwe phantsi kwekhawuntara yesiqithi sekhitshi kunye nembono esondeleyo yokugqitywa kwezinto zakudala zeengcango zekhabinethi yomthi eqinileyo. Uyakuqaphela kwakhona ubhedu obudala obuzalisa ngokugqibeleleyo uyilo lwekhitshi.
Uyilo lwekhitshi olunemilo engu-L ludibanisa iithoni ezimbini zomthi ukufezekisa oku kujongeka. Kwimigangatho, isebenzisa imigangatho yegolide yom-oki, inika indawo ukukhanya okutyheli ukufanisa iindonga ezityheli. I-ktichenc abinets, nangona kunjalo, isebenzisa ithoni yeenkuni ezingaphezulu. Ukumelana nemibala efudumeleyo efudumeleyo, isebenzisa iithayile ezingwevu ze-ceramic backsplash kunye neethayile ezimnyama ezingwevu zokubala.
Uyilo lwekhitshi lweemodyuli lwangoku olubonisa iikhabhathi ezigqityiweyo kwi-laminates ephezulu yentsimbi enezixhobo zentsimbi engenasinxibo kunye nesilayidi esimnandi sekhabethe emnyama yomthala omnyama. Iindonga, zisebenzisa indibaniselwano eyahlukileyo yepeyinti zodonga, ezinombala omhlophe osisiseko, ipeyinti esongelwe ngerakhi emdaka eludongeni olungaphezulu kunye nepeyinti esongwe ngombala omthubi-orenji kwiipateni ezinemigca ethe tyaba.
Enye ikhitshi yesitayile yeklasikhi eneekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe ezonyusa ubuhle beklasi yamakhitshi emveli. Isebenzisa izixhobo zokubala zegranite ezimnyama kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi kunye nesilayidi esityebileyo segranite ye-purplish kwisiqithi sayo sasekhitshini.
Uyilo lwangoku lwekhitshi olunobuhle obuncinci kunye nesikimu sombala omhlophe ongwevu nomhlophe. Zonke iikhabhathi zayo zi-laminated ngombala omhlophe, ngentsimbi yokukhaba engenasici kunye ne-back mosaic tile emhlophe. Kwi-countertop, isebenzisa izinto ezibonakalayo eziqinileyo ezingwevu ezibonelela ngombala ongenamthungo.
Ukudweba ukuphefumlelwa kwi-china neBlue kunye ne-china, le khitshi yanamhlanje ibonisa ubuhle beklasikhi. Igqibe ngokugqwesileyo iikhabhathi ezimhlophe kwisiphelo esihle sematte esidityaniswe nekhawuntara emnyama yegranite kunye nebhlowu emhlophe neblowu emhlophe eneepateni zeentyatyambo ezikhumbuza i-chinaware eluhlaza namhlophe. Ukuthatha ugqozi ukuya kwinqanaba elilandelayo, endaweni yokusebenzisa i-countertop efanayo emnyama ye-granite kwisiqithi sekhitshi, endaweni yoko isebenzisa ubuso obuhlaza okwesibhakabhaka, okwenza isiqithi sekhitshi sibe yinto ekhethekileyo.
Ikhitshi elikhulu elinemilo engu-L enobungangamsha nobukhazikhazi beekhitshi zakudala, kodwa zixhotyiswe ngezixhobo zale mihla. Isebenzisa iithayile zelitye elimbala ukhilimu kwimigangatho, kunye nekhabhathi emhlophe engacacanga eneenkcukacha zakudala zaseKorinte. Ngaphezulu kweekhawuntari kukho ilitye lenyengane, ngelixa isilingi sisebenzisa ii-chandeliers ezi-2 zekristale, zongeza ubuhle ngakumbi kwindawo yasekhitshini.
Uyilo lwekhitshi olunemilo encinci ye-L lukhangeleka lukhulu xa luyilelwe ukukhanya kunye nokuqaqamba. Esi sithuba siyakwazi ukusikhupha sibulele kwiindonga eziluhlaza ezipeyintiweyo kunye nombala ocacileyo wokukhanya. Iikhabhathi ezisetyenzisiweyo zonke zimhlophe ngeenkcukacha zepaneli kwaye zinee-countertops ezimnyama ezimnyama. Kwi-backsplash, isebenzisa iithayile ezimhlophe zeceramic kwipateni yesitayile esingaphantsi. Umgangatho okhanyayo wombala wobunjineli uhambelana nezitulo ezibini zomthi zokutya ngaphakathi.
Uyilo lwekhitshi lusetelwe ngokuchasene nomqolo ongqindilili kwimigangatho yomphezulu obomvu. Ukunceda ithoni phantsi komgangatho obomvu, iikhabhathi zasekhitshini zinombala weklasikhi ongacacanga omhlophe kwaye une-countertop ebomvu ebomvu. Ikwasebenzisa iithayile ezinombala we-tuscan kwiitoni eziluhlaza ukuncedisa kubomvu bomgangatho nakwizitulo zebha.
Kulo mfanekiso ikhitshi elingumlinganiso ophakathi liqhayisa ngokudityaniswa okukhulu kwemibala yeenkuni ezifudumeleyo. Kwimigangatho, isebenzisa i-walnut egolide ehambelana ne-countertop yegolide ye-yellow granite kunye nepeyinti ye-yellow-beige yeendonga. Ukumelana neethowuni etyheli, iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe zekhitshini zikuvumela ukuba uthabathe iithowuni ezishushu zomthi ezisetyenziswe kwisithuba.
Uyilo oluCwangcisiweyo lweKhitshi elincinci
Ubume obume ngo-L bubonelela ngesisombululo esifanelekileyo sezindlu ezinendawo encinci yekhitshi. Ukuziqhelanisa kakuhle nezithuba ezincinci ezinje ngezindlu okanye iikhondomu, uyilo olusebenzayo lwe-L olunekhitshi lubonelela ngezibonelelo ngeendlela ezininzi.
Esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni ubume bekhitshi obume ngo-L bufanelekile kwindawo encinci yekhitshi kukuba yonyusa indawo ngokuphinda-phinda indawo yokugcina kunye nekhawuntari yokulungiselela xa kuthelekiswa nekhitshi egaliweyo enesithuba esinye sokubala . Zombini ezi ndonga zikufuphi zinokusetyenziselwa ukukhwela ngaphezulu kweekhabhathi ezinokusebenza njengezisombululo zokugcina izixhobo zekhitshi ezahlukeneyo. Imilenze emifutshane ikwathetha ukuba kukho umgama omncinci phakathi kwemimandla okanye unxantathu womsebenzi ke kulula ukuhambahamba kwifriji, isinki kunye noluhlu, yiyo loo ndlela indlela efanelekileyo yokusebenzisa isithuba.
Ukusebenza ngokukuko ubume obume ngo-L bezithuba ezincinane zekhitshi, iisinki ezizodwa okanye iinkqubo zokugcina zinokusetyenziswa ukuze iindawo ezingakhathalelwanga okanye ezinengxaki ezinje ngeekona zisetyenziswe nazo. Izithuba zekona zinokubonakala zingenangxaki kodwa ngokwenyani, zinokubakho ngokwendlela yoyilo. Isinki yekona, umzekelo, ikhulula indawo yokubala evumela indawo engaphezulu ukuba isetyenziselwe eminye imisebenzi. Iiyunithi zokugcina ezikhethekileyo zekona ezijika ngokulula zikuvumela ukuba usebenzise nkqu nasemva kweyunithi. Kwakhona endaweni yokuyakha kwizixhobo ezisembindini wolwakhiwo, ukuphela kwemilenze yeetafile zekhitshi ezinemilo engu-L kunokusetyenziselwa ukulungiselela iifriji ezizimeleyo okanye ezakhiwe kwi-oveni.
Kwizithuba ezixineneyo, isiqithi esincinci sinokufakwa kuyilo lwekhitshi olunemilo engu-L, nangona kunjalo kungangabikho ndawo yokuhlala. Kwiimeko ezininzi, isebenza nje njengendawo yokusebenzela eyandisiweyo kunye noyilo olulula kakhulu.
Imigangatho yokubala yeemabula ezimangalisayo zeCalacatta ziyinkwenkwezi yekhitshi elimnyama lekhitshi elinesiqithi sentsasa sakusasa. Ngelixa ikhitshi likwicala elincinci lityunjwe kakuhle ngezixhobo zentsimbi zentsimbi, itayile emhlophe engaphantsi kwendlela kunye nesibane sependenti esikhanyayo.
Uhlobo lwekhitshi lwe-L-imilo yekhitshi esebenzisa iinkuni zendalo ezixineneyo kubuso beedrowa kunye nomphezulu omhlophe oqinileyo kwitafile. Iindonga ezingwevu kunye nesinyithi esenziwe ngesando songeza ubuchwephesha bendawo, ngelixa imiqadi yeplanga eveziweyo, ukukhanya okufudumeleyo kunye nebhlokhi yeplanga yongeza indawo yokufudumala kwindawo.
Eli khitshi langoku linendawo enkulu yokutya kwindawo yokutya yegranite enezitulo zangoku zebar. Umgangatho ngumbala okhanyayo wobunjineli obenziwe kwipateni yoxande, ngelixa isiqithi kunye neekhabhathi zinamabala amdaka ngombala. ukongeza umahluko kwibar yokutyela ipeyintwe mhlophe ngezixhaso ezimdaka zekhawuntara. Isinyibilikisi esenziwe ngentsimbi ephezulu emva kokutshiza kunye neethayile zesitayile ngasemva kwesitovu sonyusa ubukhazikhazi kunye nobuhle ngokubanzi.
Ngendawo encinci, eli khitshi limile njengo-L liyakwazi ukulingana kwizinto eziyimfuneko kuyilo olusebenzayo lwekhitshi, kwaye lide longeze isiqithi esingexande sasekhitshi esikwaziyo ukulungiselela iidiners ezi-2. Iikhabhathi ziyimithi eqinileyo enamabala amnyama wengue kwaye zine-slab yegrey granite.
Leli khitshi elikhethekileyo le-L lisebenzisa iikhabhathi zasekhitshini ezilaminethiweyo eMahogany kwaye isebenzisa ibhloko enkulu yecwecwe lokubala eliqhubeka de kube semva. Ikwaquka nesiqithi sekhitshi esinefriji eyakhelweyo ngaphakathi kunye nendawo encinci yokubaleka ekwaziyo ukuhlala kubantu aba-4.
Eli khitshi lincinci langoku elinesiqithi esinesiqithi sineekhabhathi ezimnyama ezinesitayile somgangatho omhlophe oqinileyo. Iindonga kunye nemigangatho zivaliwe kwithayile yeenkozo zeplanga ze-porcelain ebonelela ngasemva kwesitayile. Ngaphantsi kokugcinwa kwesiqithi kunika indawo eyongezelelweyo yezitya zasekhitshini kunye neembiza kunye neepani. Iifestile ezimbini zoxande zinceda ukuzisa ukukhanya kwendalo ukukhanyisa indawo.
Enye ikhitshi yohlobo lwakudala enqunyelwe kancinci xa kufikwa kwindawo. Kwiikhabhathi zisebenzisa iikhabhathi ezinamacwecwe anemifanekiso kunye neenkcukacha zaseKorinte kwaye zayifaka ngetafile yokukhanya engwevu egrey. Ikwasebenzisa iithayile zemabhile zetyatye kwipateni yethayile yangaphantsi yendlela yokubuyela umva ukutshatisa i-countertop engwevu.
iiseti zeringi yomtshato epinki
Eli khitshi linokuba lincinci, kodwa alisileli ukuhambisa ngokwendlela yoyilo. Ngelixa ukugqitywa kweenkuni kuhlala kufumaneka phantsi kwiikhabhathi zasekhitshini, olu luyilo lwekhitshi lusebenzisa iinkuni zeGolden Walnut kwiindonga zalo endaweni yoko, zinika umahluko omnandi kumgangatho we-oki oqaqambileyo. Iikhabhathi zekhitshi zilaminishwe kwi-laminate ekhanyayo ene-beige ephezulu kwaye ine-countertop ye-beige countertop. ikwanazo nezibane ezihlanganisiweyo zangaphantsi kwekhabhinethi kunye nezixhobo ezihambelanayo ezigqibeleleyo kubungakanani bendawo.
Le khitshi incinci kodwa into ephulukana nayo ngobungakanani iyenzela umbono wayo omangalisayo welizwe. Isithuba sibonelela ngesitayile esicocekileyo esincinci kunye neekhabhathi ezimhlophe ezimenyezelisiweyo, izixhobo ezifihliweyo kunye nesitovu somgangatho ophantsi owakhelwe phezulu kwikhawuntara yeplanga. Udonga oluqingqiweyo lwelitye elinexabiso eligcwele isityebi ngombala kunye nokudlidliza kwaye kudala imeko ephezulu.
Le khitshi yanamhlanje idibanisa ukugqitywa okucacileyo kunye nokugqitywa kweenkuni ukunika indawo imibala eyahlukeneyo kunye nezinto ezenziwayo. Uninzi lweekhabhathi zilaminishwe ngombala omhlophe kunye nekhabhathi encinci kunye nedrawer etsala. Iilitha eziluhlaza ze-Plain zazisetyenziswa kunye nokugqitywa okumnyama kwe-oki.
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Iingcamango ezincinci zeCuisine Design - Iziyilo ezingama-77 zesiQithi seKhitshi lesiqhelo - Iingcamango zeKhitshi eziMiselweyo
imidlalo yokudlala kwitheko lomtshato
I-avareji yeendleko zomtshato
umbono wesikhumbuzo seminyaka engama-50 sitshatile